Haweeney shaqaalaysiisay qof been u sheega ayeeyadeed 13 sano, naxariis darteed | Star FM
Home Warbixino Dheeraad ah Haweeney shaqaalaysiisay qof been u sheega ayeeyadeed 13 sano, naxariis darteed
Haweeney shaqaalaysiisay qof been u sheega ayeeyadeed 13 sano, naxariis darteed
Haweeney Shiineys ah ayaa lagu qasbay inay been u sheegto ayeeyadeed, oo xitaa ay qortay qof sidaas oo kale sameeya, muddo 13 sano ah, si looga fogaado in qalbiga la jabiyo ayeeyadeed.
Warbaahinta Shiinaha ayaa dhawaan soo bandhigtay sheekada murugada leh ee gabar dhalinyaro ah oo go’aansatay inay been u sheegto ayeeyadeed muddo tobanaan sano ah, iyadoo ogayd in runta ay qalbiga jabinayso.
Cheng Jing, waa haweeney 46 jir ah oo ka soo jeeda gobolka Xi’an, waxay dhawaan wayday ayeeyadeed, oo ku dhimatay da’da 100 sanno, laakiin 13-kii sano ee ugu dambeysay nolosheeda, waxay sameysay wax walba oo karaankeeda ah si ay uga dhaadhiciso ayeeyadeed in gabadheeda, oo ah Cheng Jing hooyadeed ay wali nooshahay.
Hooyadeed Jing waxay dhimatay 2003-dii, balse iyada oo og in warkaasi uu wax u dhimi doono ayeeyadeed, waxay miciin biday inay shaqaalaysiiso qof ku dayda codka hooyadeed oo taleefanka kula hadla ayeeyadeed si ay uga badbaado xanuunka geerida gabadheeda.
Jing hooyadeed, Cheng Congrong, iyo ayeeyadeed waligoodba aad ayay isugu dhowaayeen, xitaa ka dib markii Cheng uu ku dhacay kansarka sanbabada sanadkii 2003, weli way wici jirtay hooyadeed inta badan si ay u ogeysiiso inay wanaagsan tahay.
Iyada oo og in aysan haysan wax badan oo ay ku noolaato, Congrong xitaa waxay duubtay codad badan oo fariimo ah waxayna ka codsatay caruurteeda inay u ciyaaraan ayeeyadooda si aysan uga walwalin.
Cheng Jing ayaa ixtiraamtay hooyadeed rabitaankeedii ugu dambeeyay ka dib dhimashadeeda naxdinta leh, waxaynaa sii waday inay ciyaarto codadkii ay hooyadeed u sameeysay ayeeyadooda, iyadoo ku xiran waqtiga sanadka.
Farriimaha codku muddo ayey shaqeynayeen, laakiin Chen Jing ayaa si dhakhso leh ku ogaatay in ayeeyadeed ay dareentay codadku in la sii duubay.
Waxay heshay qof ku dayda codka hooyadeed sida ugu dhow uguna macquulsan waxayna ka codsatay inay wacdo ayeeyo una xaqiijiso inay wax waliba hagaagsan yihiin.
Chen Weiping, oo ah haweeneyda la kireestay ayaa go’aansatay inay caawiso Chen Jing Ka dib markay dhageeysatay sheeekadeeda.
Balse arrinta sida la rabay ma aysan noqon wicitaankii ugu horreeyay maadama ay Chen Jing ayeeyadeed dareentay in qofka la hadlayo aysan ahayn gabadheeda.
Waxay ku andacooneesay inuu hergab hayo sidaasna uu codkeeda isku bedalay.
13 sanno oo ay sidaas sameenesay ayay ugu danbeen Chen Jing ayeeyadeeda geeriyootay.
Previous articleGolaha ammaanka qaramada midoobay oo kulan ka yeeshay khilaafka wabiga Nile
Next articleDHAGEYSO:Madaxweynaha dalka oo maanta kor meer ku tagay qara ka mid ah ismaamulada Ukambani